बिक्रम पाण्डेदेखि पप्पुसम्म कर नतिर्ने ठेकदारको सूचीमा - satkar post
बिक्रम पाण्डेदेखि पप्पुसम्म कर नतिर्ने ठेकदारको सूचीमा
काठमाडौं । सरकारबाट मोबिलाइजेसन शुल्क लिएर काम नगर्नू धेरै ठेकदार कम्पनीको आदत नै बनिसक्यो । तर पछिल्लो समय धेरै निर्माण कम्पनीहरुले कानून बमोजिम तिनुपर्ने कर समेत बुझाउन छोडेका छन् ।
साना ठेकेदार मात्रै हैन, पूर्वमन्त्रीदेखि सांसदसम्मका कम्पनी पनि कर नतिर्नेहरुको सुचीमा छन् । कर तिर्न आन्तरिक राजश्व विभागले पटक–पटक आह्वान गरे पनि सुनुवाई भएको छैन । राजनीतिक संरक्षण पाएका ठेकेदारले त अटेर नै गर्ने भए ।
विशेषगरी विभिन्न निर्माण कम्पनी जोडिएर ज्वाइन्ट भेञ्चरका रुपमा काम गरेका कम्पनीले कर तिर्न आनाकानी गर्छन् । हाल प्रत्येक जसो आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा कर नतिर्नेको सूचीमा ठेकेदार कम्पनीहरु बढी देखिन थालेका छन् ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय बानेश्वरले मंगलबार २५ बढी कन्सट्रक्सन कम्पनीलाई कर बक्यौता तिर्न आउन पत्राचार गर्दै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । बानेश्वरका कर अधिकृत काजीबाबु कोइरालाका अनुसार जेभीका रुपमा काम गरेका ठेकेदारबाट कर उठाउन बढी समस्या छ ।
‘ठेक्का हात पार्न सानो कम्पनीले ठूलासँग मिलेर टेन्डरमा भाग लिने र ठेक्का हात परेपछि फेरि अर्को सानो ठेकेदारलाई जिम्मा लगाएर हिँड्ने प्रचलन रहेछ । यस्ता कम्पनीबाट कर उठाउन अप्ठेरो भएको छ,’ कोइरालाले भने ।
कसरी पाउँछन् कर नतिर्दा पनि ठेक्का ?
आन्तरिक राजश्व विभागले यस्ता कम्पनीबाट कति कर उठाउन बाँकी छ भन्ने एकिन तथ्यांक निकालेको छैन । तर, यस्तो रकम कराडौं हुनसक्ने अनुमान छ ।
ठेकदार कम्पनीले ठेक्का पाएपछि त्यसको मूल्य अभिवृद्धि कर र त्यसबाट हुने आय कर तिर्नुपर्छ ।
कतिपयले विवरण नै पेश गरेका छैनन् भने विवरण पेश गरेकाहरुले पनि कर तिरेका छैनन् । कतिपय ठेकेदार विभागको सम्पर्कमा आउँदैनन् भने कतिले ार्यालय परिवर्तन गर्ने गरेका छन्, जसका कारण विभागले पठाएको पत्र पुग्दैन ।
ठेकेदाहररुले कर नतिरेपनि नयाँ ठेक्का भने पाइराखेका छन् । उनीहरुले एकपछि अर्को ठेक्का हात पारिरहादा राज्य भने करविहीन भएको छ ।
विकास अड्डाका हामिकहरूसँग मिलेमतो गर्दै उनीहरुले कर नतिर्दा समेत ठेक्का हात पार्न सफल भइरहेका छन् । नियम विपरीत यस्तो काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई पनि यिनै ठेकेदार नेताको संरक्षण मिल्ने गरेको छ ।
को–को छन् कर नतिर्नेको सूचीमा ?
विभागलाई समयमा कर नतिर्नेको सूचीमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनदेखि निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियारको कम्पनी पप्पु कन्सट्रक्सनसम्म छ ।
पाण्डेले कालिकारकान्छाराम जेभी अन्तरगतको कर तिर्न अटेरी गरेका छन् । त्यसैगरी कान्छाराममा कन्सट्रक्सनका मालिक तथा रामेछापका कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर तामाङलाई पनि विभागले कर तिर्न बोलाएको छ ।